“Waligey tan oo kale ma arag” Dhambaal naxdin leh oo ka yimid dhakhtar - BBC Somali
9 Disembar 2016
Lahaanshaha sawirka Syrian Arab Red Crescent
Image caption Dagaalka adag Dhakhaatiirtu way hadal beeleen
Iyado dadkii taagta darnaa ee magaalada Xalab maalinimadii Arbacada laga raray gurigii hore ee dadka da'da ah ee ku dhaw furinta dagaalka ee magaalada, Dhakhtar ka tirsan hay'adda Laanqayrta cas oo qayb ka ahaa daadguraynta dadkaas ayaa BBC wuxuu u soo diray waraaqdan.
Anigoo dhakhtar ahaan ugu shaqeynaya hay'adda laanqayrta cas ee caalamiga ah ee (ICRC) waxaan ku arkay wax badan Suuriya shanti sano ee la soo dhaafay, laakiin ma arag tan mid la mid ah.
Daawo:Nolosha magaalda go'doonsan ee Xalab
Ruushka oo hakiyay duqeyntii bariga Xalab
Ruushka oo diidan qorshaha nabadda ee Xalab
Image caption "Meesha dhamaadka aduunka" sida inay caro soo burqatay"
Dowladda Suuriya oo duqeysay Xalab
Duqeyntii ugu xumeyd oo ka dhacday Xalab
Image caption Dhakhaatiirta oo doonaya inay ogaadaan dadka sida aadka ah ugu baahan in la qaxiyo
Image caption Meydad ayaa ag dhooban dadka nool
Daadgurayntu ma ahan mid sahlan. Badi, gaar ahaan kuwa maskaxda ka jiran ma doonayn inay baxaan. Way jahwareersanayeen, ciirsi la'aan ayay ahaayeen. maba aanay garowsanayn inay ku nool yihiin aag dagaal.
Qaar ayaa halkaas ku noolaa afar illaa shan sano. Wax kalaba ma aanayn garanayn "Ma lihin qaraabo kale, ma haysanno meel kale oo aynnu aadnno," qaarbaa lahaa waxaan doorbidaynnaa inaan halkan iska joogno".
Ka dibna ciidammo ayaa yimid. Waxay wadeen lix caruur ah. Waxay ka soo heleen burburka, way dhunsanaayeen, ciirsi la'aan ayay ahaayen, gabar todobo sano jir ah ayaa ugu waynayd, kan ugu yarnna wuxuu ahaa wiil 7 bilood jir ah, waxba ma aanay cunin muddo laba maalmood ah.
Image caption Bisha & laanqayrta cas waxay daadgureeyeen dadka dhaawaca ah, kuwa waayeelka ah iyo kuwa naafada ah ee maskaxda ka jiran
Image caption Qaar ka mid ah dadka maskaxda ka jiran ayaan doonayn inay baxaan
Dadkan waxay nolashooda ku waayeen dagaalkan foosha xun kaasi oo aannay shaqo ku lahay, oo aysanna go'aansan inay ka qayb qaataan. Waa kuwa ugu nugul dadka nugul. Mana jirto cid badbaadisay.
Muuqaal Daawo: Nolosha magaalada go'doonsan ee Xalab